US မာကတ်မှာ Mate 10 Pro ဖြန့်ချီမှုကိုတစ်လနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Huawei! – AsiaApps
US မာကတ်မှာတော့ Huawei ဟာအခြေမခိုင်လှသေးတဲ့ Smart phone brand တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Huawei အနေနဲ့လည်း US မာကတ်မှာနေရာယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတာ အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ကတည်းက ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့တာပါ။
နောက်လ(ဇန်နဝါရီ) ကစတင်ပြီး Huawei အနေနဲ့လည်း AT&T နဲ့ Verizon အစရှိတာတွေနဲ့ Peace ယူ တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Peace ယူပြီးတာနဲ့ သူတို့ရဲ့ အဓိကပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ US မာကတ်မှာ Huawei Mate 10 နဲ့ Mate 10 Pro တို့ကိုရောင်းချနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ US smartphone မာကတ်မှာနေရာယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ဆိုရမှာပါ။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Smartphone brand တွေထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Huawei ဟာ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ အစောပိုင်းလောက်မှာ Las Vegas ရဲ့ CES (Consumer Electronic Show) မှာ ပါဝင်မယ်လို့ တရားဝင်ကြေညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ တရားဝင်ကြေညာချက်ကို တစ်လ နောက်ဆုတ်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလ လောက်မှ မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။
Mate 10 is the first product Huawei sells in the US. Huawei is testing various tests to comply with the hardware (HW), software (SW) standards and communication standards required by AT & T.
Huawei Mate 10 ဟာ US မှာရောင်းချတဲ့ ပထမဉီးဆုံး Brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Hardware ပိုင်း၊ Software ပိုင်းကို AT & T ရဲ့ စံနှုန်းအတိုင်းစမ်းသပ်နေတာဖြစ်ပြီး Communication အပိုင်းကိုလည်း AT & T စံနှုန်းအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Huawei အနေနဲ့ AT & T ရဲ့ စံနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီမှ AT & T ကနေတဆင့်ဖြန့်ချီခွင့်ရရှိမှာပါ။ အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်လည်း AT & T နဲ့ peace ယူဖို့အရင် စဉ်းစားခဲ့တာလဲဖြစ်လောက်မှာပါ။
အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ Huawei ရဲ့ အစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ နောက် article တစ်ခုမှာ Huawei Mate 10 နဲ့ Mate 10 Pro တို့ရဲ့ကွာဟချက်လေးတွေကို ကျွန်တော် မြင်မိ၊ ကြားမိသလောက် ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ နောက် article တစ်ခုမှာပြန်တွေ့ပါ့မယ်။
https://t.co/nrMuhJgrfl #Huawei #Mate10Pro – AT&T’s Huawei Mate 10 Pro launch pushed to February pic.twitter.com/SVr7kB6kCf
— TREND GIZMO (@TrendGizmo) December 28, 2017